MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA EEYAHA DALMADOR - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Eeyaha Dalmador
Labrador Retriever / Dalmatian Isku-dhafan Noocyo Kala Duwan
'Louie waa 5 jir Dalmador ah. Waa eey aad u jilicsan cabirkiisa, runti waa difaac wuxuuna si dhaqso leh wax u bartaa, dabeecad wanaagsan oo aad u deggan oo deggan. Isagu waa saaxiibkeen ugu fiican weligiis waana xumaaday. Hooyadiis waa kalabar Dalmatian / half Labrador Retriever aabihiisna waa Dalmatian, taas oo ka dhigeysa Louie Ey isku dhafan F1b Dalmador (3/4 Dalmatian 1/4 Labrador). '
Labradal dib u habeyn
Dalmador maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Dalmatian . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Delmador
Diiwaangeliyaha Taranka Naqshadeeyaha = Labradal Retriever
Naqshadeeyaha Eeyaha Keena Naadiga = Labradal Retriever
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Delmador
'Louie the F1b Dalmador. Hooyadiis waa kalabar Dalmatian / half Labrador Retriever aabihiisna waa Dalmatian, taas oo ka dhigeysa Louie Ey isku dhafan F1b Dalmador (3/4 Dalmation 1/4 Labrador). '
Louie oo ah F1b Dalmador
doxin lagu qasay spaniel qasacadaysan
Maizy shukulaatada Labrador Retriever / Dalmatian mix (Dalmador) at 2 sano— Waxaan ku soo iibinay iyada oo 5 bilood jirta hadana wali wey kacsan tahay oo waa ciyaareysaa sidii hore. Waxay leedahay dabeecad weyn maadaama aan haysano ilmo yar. Way orod badan kartaa!
shaybaarrada madow ee greyhound sawirada
Maizy shukulaatada Labrador Retriever / Dalmatian mix (Dalmador) da'da 2 sano
Maizy shukulaatada Labrador Retriever / Dalmatian mix (Dalmador) oo 2 sano jir ah oo fadhiya gadaasheeda dambe.
Madow 17-toddobaad jir ah oo leh cad yar Dalmador (Labrador Retriever / Dalmatian mix ey)
bulldog american iyo pitbull isku qasan
17-jir Dalmador madow oo leh laabta cad ee xabadka (Labrador Retriever / eyga isku dhafka ah ee Dalmatian)
Dalmador, oo ah labrador cadaan ah Retriever / Dalmatian isku jira markay 4 bilood jirsadeen— Waa qof cajiib ah, firfircoon oo jecel inuu la ciyaaro qof walba. Laakiin sidoo kale isagu waa waardiye weyn. Wuxuu leeyahay cabsi indho buluug ah . '
'Shadows the Dalmatian x Labrador Retriever = Delmador 15 bilood. Markii sawirkan la qaaday waxaan haysanay iyada oo keliya 4 toddobaad. Iyadu waa arday aad u ciyaareysa oo jecel. '
Hooska Dalmatian x Labrador Retriever = Delmador 15 bilood
Sheba, Dalmadorkeena wacan!
Liiska eyda isku dhafan ee loo yaqaan 'Dalmatian Mix Breed'
Alaska adhijir Jarmal isku darka iyo sahashan Siberian malamute
boston terrier iyo isku dhafka bulldog
shukulaatada shukulaatada iyo isku-darka weimaraner
iskudhafka weyn ee schnauzer irish wolfhound
bolognese iskudhaf eeyo yaryar oo iib ah